Tacshiirad hal qof ku dhintay labo kalana ku dhaawacmeen oo galabta ka dhacday Galkacyo. – Radio Daljir
Tacshiirad hal qof ku dhintay labo kalana ku dhaawacmeen oo galabta ka dhacday Galkacyo.
Galkacyo, Oct 28- Ugu yaraan hal nin ayaa ku dhintay labo kalana waa ay ku dhaawacmeen tacshiirad ay fureen ciidanka sidoonka Puntland (PIS) qaybtooda ka howl-gasha magaalada Galkacyo sida ay Daljir u qaxiijiyeen qaar ka mid ah saraakiisha ammaan ee gobolka.
Wararku waxaa ay tilmaamayaan in ciidanku ay rasaasta fureen kadib markii xabbado lagu riday gaari ay saarneeyeen oo marayey waddada laamiga ah, kadibna ay ku jawaabeen rasaas badan oo daran-doori ah, taasi oo dhalisay dhimashada iyo dhaawaca soo gaaray shacabkii waddada marayey.
Ma jiraan warar ka madax bannaan kuwaasi oo sheegaya sida ay wax u dhaceen, hase yeeshee dad goob joogayaal ah oo ay la xiriirtay idaacadda Daljir ayaa sheegay in ay maqlayeen xabbado dhacay intii aan ciidanku rasaasta furin.
Tacshiiraddaan sababtay khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca iskugu jira, ayaa ka dhacday meel ay dadku ku badan-yihiin oo ku taalla aga-gaarka warshaddii hore ee Kabidda, halkaasi oo ah meel inta badan ay ku yaalliin majlisyada la fariisto isla markaana dadku ay ku qaxweeyaan.
Dadka dhintay iyo kuwa dhaawaca ah ayaa dhammaantood ah dad shacab ah oo ku sugnaa goobta rasaastu ka dhacday, waxaana raggii ku dhaawacmay falkaasi haatan lagu dawaynayaa isbitaalka GMC ee magaalada Galkacyo, waxaana la sheegayaa xaaladdoodu in ay tahay mid ka soo raynaysa.
Falalka ammaan xumo ee ka dhaca magaalada Galkacyo ayaa ah kuwo soo xoogaysanaya maalinba maalinta ka danbaysa, waxaana shalay oo ugu danbaysay gudaha magaalada Galkacyo lagu dilay askari ka tirsan ciidanka ammaanka halka mid kalana lagu dhaawacay.